Toriteny - Page 2 sur 10 - Lalamasaka Hatry ny Ela
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 3 mai 2020
Mivelona amin’ny Fankatoavana an’Andriamanitra, Bro Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano
Eo am-pihainoana ny torinteny dia aza adino ny manindry ny bouton Like. +1
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 16 avril 2020 · Last modified 25 avril 2021
Mariky ny Bibidia, Jesosy Mamonjy Ankorondrano Bro Daoud
Mark of the Beast, Bro Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano « Ao anatin’ny vanim-potoan’ny andro farany isika izao. Hisy fiovana tampoka ao anatin’ny fotoana fohy eto amin’izao tontolo izao. Raha hiteny aho hoe tokony hivavaka ianao, dia anio izay fotoana izay fa tsy tokony hangatak’andro ». Fr Daoud +1
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 12 avril 2020
Ny Fanasan-tongotra, Jesosy Mamonjy Ankorondrano, BroDaoud Dec27 1963
Torinteny Alahady Paska 2020, amin’ny 3ora hariva NY FANASAN-TONGOTRA Jesosy Mamonjy Ankorondrano, Bro Daoud Dec 27 1963 Maro amintsika no miantso ny fiverenan’ny Fiangonana ho amin’izay niaingana (miverena any Betela, ny fahamasinana, ny firaisan-kina), ny rivo-panahy niainana teo aloha, ny toe-panahy araka an’Andriamanitra sy ny fifankatiavan’ny samy zanak’Andriamanitra. Ity torinteny ity dia isan’ireo tenin’Andriamanitra faheno sy namolavola ireo raiamandreny tany...
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 4 avril 2020 · Last modified 12 avril 2020
Fankalazana ny Paska
Ao anatin’ny herinandro fankalazana ny Paska isika izao. Fotoana lehibe izay ahatsiarovana ireo asa lehibe nataon’ny Tompontsika, dia tsy inona fa ny ASAM-PAMONJENA nataony teo amin’ny hazofijaliana, ary ny fiaretany ireo kapoka sy fampijaliana nitondrany ny aretintsika rehetra handraisantsika FANASITRANANA avy amin’ny dian-kapoka nentiny.Koa sitrakay ny hanolotra ho antsika ireto lahatsoratra ireto indrindra raha mbola mpanota mila famonjena ianao, na...
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 2 avril 2020 · Last modified 4 avril 2020
Fiverenan Jesosy indray. Ny Famantarana ny andro farany. Ireo fiomanan’ny bibidia amin’izao andro farany izao hahatanteraka ny Faminaniana. Ity torinteny ity dia isan’ireo faminaniana sy torinteny maromaro nambaran’ny Mpanompon’Andriamanitra Fr Daoud taona vitsy talohan’ny fanambaràna ny fitsanganan’ny Vondrona Europeana (Union Européenne) ary ny fivoahan’ny vola Euro. +1
par Administrator · Published 30 mars 2020
Avereno indray ny fifandraisanao amin’Andriamanitra
Ny hoe tonga Kristiana dia tsy midika fa hanana fiainana mahafinaritra foana. Mandrakariva dia mandalo fotoan-tsarotra tokoa isika ary mila tsy hahita intsony hoe aiza no fiafaran’izao lalako izao. Arakaraky ny hanotana, dia mahatsapa isika fa miha manalavitra ny tavan’Andriamanitra ka tonga tsy maha vavaka intsony, tsy mahavita makany am-piangonana intsony. Ary manosika mafy ny fahavalo, mitondra eritreri-dratsy marobe, mitondra...
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 28 mars 2020
Fampakaram-badin’ny Zanak’Ondry BroDaoud April 1 1963
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 22 mars 2020 · Last modified 29 mars 2020
Andro farany izao, ho avy Jesosy
Nitory teny matetika Fr Daoud tany amin’ny taona 1997 tany hoany fa ho avy tsy hoela ny andro mahory, hisy ny fanenjehana sy mosary, ary hikatona ny fiangonana ka tsy ho afaka mivavaka isika. Tsy hisy hahazo hividy na hivarotra raha tsy manana ny mariky ny bibidia. Koa ny herin’Andriamanitra angoninao izao, ny fiainam-bavaka betsaka ataonao izao, ny fahazaranao mivavaka...